musha » Proform.com » ProForm 440R Rower inotengeswa chete $ 399!
Kubudirira Kwemagariro Kunopa Rowing Machine Kubva kubva ProForm.com
ProForm 440R Rower inotengeswa chete $ 399 ne FREE Shipping!
ProForm 440R rowing machine inobatanidza cardio musimba rekudzidzira zvose mune imwe yemashini inonakidza. I440R ine 8 kupikisa mazinga ayo achakukumanikidza kuhutano hunotevera. Inobatanidza LCD huru iyo inokubvumira kuti uone maitiro ako paminiti, maitiro ose, nguva, kure, uye makoriri akapiswa. Iine 250 pound kuyerwa kwepamusoro uye inosanganisira 5-year frame warranty. Zvikamu uye basa rinovharwa kwemazuva 90.
Uyu mhizha wokutema unowanzosvika $ 999. Kwenguva shoma chete, unogona kuchengetedza $ 600 kubva pamutengo wekutengesa! Pay chete $ 399 nekuda kwekushongedza kunoshamisa! Kuti utenge iyi yemashini ekukwezva, tinya pano. Kana ukangosvika paWebForm webhusaiti, sarudza Rowers pamusoro pewebsite yavo. Iwe uchazokwanisa kuwedzera 440R kumotokari yako yekutenga.
Iyi mutengo wokutengeserana we $ 399 yeProteform 440R haigone kwenguva refu ... kutenga nhasi! Iyi mhizha yekugadzira inobatsira kwenguva shoma kubva chete ProForm.com
* Proform 44oR Rower Mutengo Wokutengeserana we $ 399 Unofananidzwa neHNUMX / 12 / 17 14: 3 AM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paProForm.com panguva yekutenga ichashandiswa pakutenga mutsara uyu
December 2014 Adidas Kutengesa: 20% Off Orders ye $ 99 + Yakagadzirirwa 12 / 17-12 / 19 / 14